बन्द प्रशिक्षणमा १२ नयाँ खेलाडी - Khelpati
बन्द प्रशिक्षणमा १२ नयाँ खेलाडी
बिहिवार, मंसिर १८, २०७७ रमेश सुवेदी
काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले राष्ट्रिय फुटबल टिमका लागि प्रारम्भिक चरणमा ५८ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ ।
फिफा विश्वकप र एसियन कप छनोट अन्तर्गत बाँकी रहेको ३ खेलका लागि एन्फाले बुधबार ५८ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको हो ।
छनोटको समूह 'बी' मा रहेको नेपालले घरेलु मैदानमा अष्ट्रेलिया, जोर्डन र चाईनिज ताईपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ ।
सोहि खेलका लागि कार्यकारी प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले ठुलो संख्यामा खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएका हुन् ।
महर्जनले बोलाएको टिममा लामो समय टिम बाहिर रहेका कप्तान विराज महर्जन, स्ट्राइकर विमल घर्ति मगर, मिडफिल्डर सन्तोष तामाङ, डिफेन्डर दिनेश राजवंशी र आदित्य चौधरी परेका छन् ।
गत सहिद स्मारक 'ए' डिभिजन लिग खेलेका १२ युवा खेलाडीलाई प्रशिक्षक महर्जनले पहिलो पटक बन्द प्रशिक्षणका लागि मौका दिएका हुन् ।
बन्द प्रशिक्षणमा पहिलो पटक स्थान बनाएका १२ खेलाडी कस्ता छन् ? उनीहरुबारे चर्चा तल गरिएको छ ।
रेजिन सुब्बा -
एन्फा एकेडेमीबाट उत्पादित रेजिन गत लिगमा मछिन्द्र क्लबको प्रतिनिधित्व गर्दै लिगको उपाधि हात पार्न सफल भएका थिए । त्यस क्रममा उनले २ गोल गरेका थिए । नेपाल पुलिस क्लबबाट व्यवसायिक फुटबलको सुरुवात गरेका रेजिनले नेपालको यू-१९ साफ च्याम्पियनसिप र १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को उपाधि समेत हात पारिसकेका छन् । उमेर समूहमा समेत उनले विभिन्न प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् ।
निशान खड्का -
गत लिगमा निशान थ्री स्टार क्लबका महत्वपूर्ण खेलाडी रहे । टिममा ठुला खेलाडीले क्लबलाई साथ छोड्दा उनि क्लबका लागि बरदान सावित भए । उनको उत्कृष्ट प्रदर्शनले क्लबले लिगमा चौथो स्थानमा रह्यो भने मोफसलमा केहि उपाधि समेत हात पार्याे । निशान यस अघि च्यासल युथ क्लबमा अनुबन्धित थिए ।
राजेश परियार -
एनआरटी क्लबका स्ट्राइकर राजेश पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको क्लोज क्याम्पमा स्थान बनाएका हुन् । एन्फा एकेडेमीका यी खेलाडीले हालै भारतीय आईलिग छनोट अन्तर्गत एआरए एफसीको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । नेपाललाई यू–१८ साफ च्याम्पियनसिप र १३ औं सागको उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका राजेशले उमेर समूहको अन्य प्रतियोगितामा समेत भाग लिएका छन् ।
अशोक थापा -
एन्फाले बोलाएको ५८ खेलाडीको सूची मध्ये गुमनाम रहेका खेलाडी हुन् पश्चिम बुटवलका अशोक थापा । एनआरटी क्लबका डिफेन्डर अशोक नेपालले भुटानमा दोस्रो पटक साफ यू–१८ को उपाधि हात पार्दाका खेलाडी हुन् । उनकै ब्याजका खेलाडीले १३ औं सागको उपाधि र राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाईसक्दा उनि पहिलो पटक क्याम्पमा डाकिएका हुन् ।
विशाल सुनार -
पछिल्लो एन्फा ब्याजबाट उत्पादित गोलरक्षक हुन् विशाल सुनार । पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको क्लोज क्याम्पमा स्थान बनाएका बिशालले यस अघि नेपालमै भएको यू–१८ साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता र यू–१९ एएफसी छनोटमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । दुई पटक ब्रिगेड ब्वाईज क्लबलाई यू–१८ ललित स्मृतिको उपाधि दिलाएका उनले यस सिजन लिगमा बीबीसीकै गोलपोष्ट सम्हालेका थिए ।
रन्दिप पौडेल -
पोखराका यी डिफेन्डर पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको क्लोज क्याममा बोलाइएका हुन् । गत लिगमा ब्रिगेड ब्वाईज क्लब (बिबिसी) को डिफेन्स लाईन समालेका रन्दिप एन्फा उत्पादित खेलाडी हुन् । उनले उमेर समूहमा यू–१८ साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता र यू–१९ एएफसी छनोट प्रतियोगितामामा सहित विभिन्न समूहका प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
रजत तिवारी -
हाल बोलाईएका ५८ खेलाडीमा अर्काे नयाँ अनुहार हो रजत तिवारी । फुटबल समर्थक माझ त्यति परिचित नरहेका उनि ब्रिगेड ब्वाईज क्लबकै मिडफिल्डर हुन् । उनले गत दुई सिजनको लिगमा ब्रिगेड ब्वाईज क्लबको प्रतिनिधित्व गरेका थिए । भोजपुर निवासी रजत उमेर समूहमा समेत बिबिसीलाई ललित स्मृति कपको उपाधि दिलाएका थिए ।
पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको क्लोज क्याम्पमा स्थान बनाएका जया एन्फा एकेडेमी उत्पादित हुन् । उनको कप्तानीमा नेपालले साफ यू–१८ प्रतियोगिता र यू–१९ एएफसी छनोट खेलेको थियो । दुई सिजन बिबिसीलाई आफ्नो कप्तानीमा ललित स्मृति यू–१८ को उपाधि दिलाएका जयाले व्यवसायिक फुटबलको सुरुवात पनि बिबिसीबाट नै गरेका हुन् ।
दिपेश आले मगर -
संकटा क्लबका मिडफिल्डर दिपेश आले मगर पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा सामेल भएका हुन् । व्यवसायिक फुटबलमा संकटा क्लबका लागि स्थान बनाएका उनले दुई सिजन यसै क्लबका बिताईसकेका छन् । दिपेशले यू–१८ ललित स्मृति आर्मी र संकटाबाट खेलेका थिए । नेपालले साफल यू–१८ को उपाधि भुटानमा हात पार्दा दिपेश टोलीका मुख्य खेलाडी थिए ।
देब लिम्बु -
कुपन्डोलको फ्रेन्ड्स क्लबमा आवद्ध देब पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा स्थान बनाएका हुन् । झापाका यी खेलाडीले गत सिजन फ्रेन्ड्स क्लबको गोलपोष्ट समाल्ने अवसर पाएका छन् ।
प्रिजेन तामाङ -
स्ट्राइकर प्रिजेन एन्फा एकेडेमी उत्पादित खेलाडी हुन् । उनको महत्वपूर्ण प्रदर्शनमा नेपालले यू–१८ साफ च्याम्पियनसिप र १३ औं दक्षिण एसियाली प्रतियोगिता सागको उपाधि जितेको थियो । उमेर समूहमा भने उनले आर्मी क्लब र पुलिस क्लबबाट ललित स्मृति कप खेलेका थिए । व्यवसायिक फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबको प्रतिनिधित्व गरेका प्रिजेन पहिलो पटक राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा स्थान बनाएका हुन् ।
राजिव लोप्चाङ -
राजिव पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीको प्रशिक्षणमा स्थान बनाएका हुन् । यस अघि नेपाललाई यू–१८ साफ च्याम्पियनसिप र १३ औं सागको उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेका राजिव व्यवसायिक फुटबलको लागि एपीएफ क्लबसँग आवद्ध छन् । एन्फा एकेडेमीको उत्पादन राजिबले उमेर समूहको विभिन्न प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् ।
यूईएफए 'टिम अफ दि इयर' मा रोनाल्डो र मेस्सी
फर्कियो घरेलु फुटबल !
हेटौडा भेट्रान्स र चाबहिल भेट्रान्सको जित
उपाधिका लागि आयोजक र मसुरिया भिड्ने
धाप टोल र खाद्य टोल क्वाटरफाइनलमा
राजस्थानको कप्तानी सामसनले गर्ने